समाचार - हामी दिनहुँ कति प्लास्टिक खान्छौं?
हामी प्रत्येक दिन कति प्लास्टिक खान्छौं?
हामी दिनहुँ कति प्लास्टिक खान्छौं?
आज यो ग्रह पहिले भन्दा बढी गम्भीर प्लास्टिक प्रदूषण देखिरहेको छ। माउन्ट एभरेष्टको शिखरमा South, 00 ०० मिटर दक्षिण चीन समुद्री तल, आर्कटिक बरफ टोपीहरू बीच र मारियाना ट्रेंच प्लास्टिकको प्रदूषणको मुनि पनि जताततै छ।
द्रुत उपभोगको युगमा हामी प्लास्टिकले छापिएको नास्ता खान्छौं, प्लास्टिकको मेल झोलामा पार्सलहरू प्राप्त गर्छौं। फास्ट फूड समेत प्लास्टिकको कन्टेनरहरूमा समेटिन्छ। ग्लोबल न्यूज र भिक्टोरिया युनिभर्सिटीले गरेको एक सर्वेक्षण अनुसार वैज्ञानिकहरूले मानव शरीरमा mic माइक्रोप्लास्टिक पत्ता लगाए र एक अमेरिकी वयस्क १२ 12 देखि १ to२ माइक्रोप्लासिट कणहरू निल्न सक्छन् र दिनको १ 13२ देखि १ 170० प्लास्टिक कणहरू भित्र पस्न सक्छन्।
माइक्रोप्लास्टिकहरू के हुन्?
ब्रिटिश विद्वान थॉम्पसनले परिभाषित, माइक्रोप्लास्टिकले प्लास्टिकको स्क्र्याप र कणहरूलाई जनाउँछ जसको व्यास5माइक्रोमिटर भन्दा कम छ। Mic माइक्रोमिटरहरू एकल कपालको तुलनामा धेरै गुना पातलो हुन्छन् र यो मानव आँखाले मुश्किलले देख्न सक्ने हुन्छ।
माइक्रोप्लास्टिकहरू कहाँबाट आउँछन्?
Qu एक्वाटिक उत्पादनहरू
१ th औं शताब्दीमा प्लास्टिकको आविष्कार भएदेखि यता 8,3 बिलियन टन भन्दा बढी प्लास्टिक उत्पादन भएको छ जसमध्ये 8 मिलियन टन भन्दा बढी वर्षेनी समुद्री महासागरमा प्रशोधन नगरी समाप्त भयो। परिणामहरू: माइक्रोप्लास्टिकहरू ११4 भन्दा बढी जलीय जीवहरूमा पत्ता लगाइएका छन्।
Food खाना प्रशोधनमा
वैज्ञानिकहरूले भर्खर9देशहरूमा २ across० भन्दा बढी बोतलयुक्त पानी ब्रान्डहरूमा एक व्यापक सर्वेक्षण गरेका छन् र पत्ता लगाएका छन् कि बोतलको पानी धेरै उनीहरूमा छ। नलको पानीमा पनि माइक्रोप्लास्टिकहरू छन्। एक अमेरिकी अनुसन्धान संस्थानका अनुसार १ 14 वटा देशहरूमा नलको पानी सर्वेक्षण अन्तर्गत रहेको छ, तीमध्ये%% प्रतिशतले यसमा माइक्रोप्लास्टिकहरू पाए। प्लास्टिकको कन्टेनर र डिस्पोजेबल कपहरूमा डेलिभरी र बबल चिया उल्लेख नगर्न जुन हामी लगभग दैनिक सम्पर्कमा राख्छौं। त्यहाँ Polyethylene को एक कोटिंग अक्सर सानो कणहरु मा विभाजित हुनेछ।
त्यो एकदम अप्रत्याशित छ! तर यो बुझ्न गाह्रो छैन। नुन समुद्रबाट आउँछ र जब पानी प्रदूषित हुन्छ, नुन कसरी सफा हुन सक्छ? अन्वेषकहरूले १ किलको समुद्री नुनमा rop50० भन्दा बढी माइक्रोप्लास्टिकहरू भेट्टाए।
④ घरेलु दैनिक आवश्यकताहरू
एउटा तथ्य जुन तपाईंले महसुस गर्न सक्नुहुन्न भन्ने छ कि माइक्रोप्लास्टिकहरू तपाईंको दैनिक जीवनबाट उत्पन्न गर्न सकिन्छ। उदाहरण को लागी, धुने मेशीनबाट पॉलिएस्टरको कपडा धुनुले धुलाईबाट धेरै अति उत्तम फाइबर निकाल्न सक्छ। जब ती फाइबरहरू फोहोर पानीको साथ उत्सर्जन हुन्छन्, तिनीहरू माइक्रोप्लास्टिकहरू हुन्छन्। अन्वेषकहरूको अनुमान छ कि दस लाख जनसंख्या भएको शहरमा एक टन सुपरफाइन फाइबर उत्पादन गर्न सकिन्छ, जुन १ 000००० गैर-डिग्रेडेबल प्लास्टिकको झोलाको बराबर हो।
सुपरफाइन फाइबरहरू हाम्रो कोषहरू र अंगहरूमा समाप्त हुन सक्छ, जसले पुरानो बिषयव विषाक्तता र क्यान्सर जस्ता गम्भीर रोगहरू निम्त्याउन सक्छ।
हामी कसरी झगडा गर्ने?
नेचरपोलि प्लास्टिकको लागि बायोडिग्रेडेबल प्रतिस्थापन उत्पादन गर्न कोसिस गर्दछ। हामीले अनुसन्धान र इको-मैत्री प्लान्ट-आधारित सामग्री जस्तै पीएलए, उखु सामग्रीको अनुसन्धान र विकासमा लगानी गरेका छौं। हामी उनीहरुलाई घरको जरुरी सामानको निर्माणमा प्रयोग गर्दछौं जस्तै फोहोर झोला, किनमेल झोला, पप ब्याग, क्लिप र्याप, डिस्पोजेबल कटलरी, कप, स्ट्रु र आउन आउने अन्य धेरै सामानहरू।